Kaar Ganacsi oo Gaar ah ... er Chip | Martech Zone
Galabta, waxaan kulan weyn la yeeshay kuweena la taliyaha ganacsiga Harry Howe iyo annaga wakiilka caymiska ganacsiga, Joe Glaser. Waxay ahayd kulan weyn maxaa yeelay Joe iyo Harry waxay aqoonyahanno u yihiin inay hoos u dhigaan dhammaan waxyaabaha halista iyo caymiska ku jira kulan kooban oo ay asal ahaan ii sheegaan wixii aan sameyn lahaa waana ku kalsoonahay inay sidaa sameeyaan.
Waxaan qaadnaa caymis dhowr sababood… haddii ay tahay xatooyada qalabka ama waxyeellada, dacwadda, caymiska safarka, caymiska nolosha, iwm. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda ee aan u baahan nahay inaan qabanno ugu yaraan qaddarka caymiska ganacsiga si loo ilaaliyo labadaba shirkadooda iyo kaayaga. Ganacsi yar oo cabirkeennu si fudud ayaa loogu aasi karaa hal mar oo dil ah haddii aanaan haysan caymiska… markaa waxaan iska ilaalinaynaa halista oo waxaan bixinnaa biilka sannad kasta.
Anigu waxaan ahay taageere weyn oo kaararka ganacsiga gaarka ah leh Joe-na wuxuu soo saaray shirkadiisii ​​ugu dambeysay uguna weyneyd ee aan u maleynayay inay runti tahay mid gaar ah oo mudan in la xuso Waa qashin turub dhab ah oo leh faahfaahinta shirkadda dhinac ah iyo macluumaadka xiriirka Joe ee dhinaca kale. Qalabka turubka… ee wakiilka caymiska… qiime la aan!
PS: Haddii aad tahay shirkad fadhigeedu yahay Indiana una baahan tahay talo adag, waxaan si weyn ugu talin lahaa Joe Glaser iyo Kooxda Thompson. Ka soo wac isaga 317.514.7520.
Tags: kaarka ganacsikaarka ganacsiga turubcaymiska ganacsigajoe glaserqamaarka turubkakooxda thompson